Maalinta: 26-ka July, 2019
Gaadiidka Khaliijka Waxay Balaarinayaan Doomaha Tareenka
Qeybta Tüpraş ee qeybta tareenka, Körfez Transport A.Ş waxay heshay shan loodi-taxane PowerHaul® taxane ah oo laga soo saaray xadka iskaashiga TÜLOMSAŞ-Wabtec. Gawaarida cusub ee tayada sare leh, isku halaynta [More ...]
Difaaca Musiibada ee TCDD: Dhererku wuxuu dheeraa Dayactir Dhibaato Leh
Saraakiisha sare ee TCDD, 13 ee Ankara 2018 Diseembar 9 dadka ayaa ku dhintay masiibada tareenka xawaaraha sare, halka ay sharax ka bixinayaan sababaha "dayactirka dheer ee maqaska sababta oo ah isbedelka dheer," Burcu wuxuu ka yiri Birgün [More ...]
Baabuurka 'Babadağ Cable Car' wuxuu martigalin doonaa 1 Milyan oo Qof sanad walba
Xarunta Ciyaaraha iyo Madadaalada ee Babadağ Air ee degmada Fethiye ee Mu ofla, waxay ahayd albaabka rootiga ee dalxiiska degmada. Tirada jajabyada jajaban qeybtii hore ee sanadka ayaa kordhay boqolkiiba 18 boqolkiiba sanadkii la soo dhaafay. Fethiye [More ...]
Bursa BURULAŞ waxay helaysaa shaqaalaha 55, darawalada iyo Saraakiisha Xafiiska Box
Sida ku xusan ogeysiiska lagu daabacay İŞKUR, BURULAŞ wuxuu cadeeyay inay shaqaaleysiin doonaan shaqaalaha 55 shaqooyin kala duwan. Waa tan qaybinta shaqaalaha iyo shuruudaha. Golaha Business Turkey ee July 25 2019 iyo shaqaalaha dadweynaha [More ...]
Boqortooyada Sacuudi Carabiya waxay ogolaatay Tareenka Hyperloop
Sacuudi Carabiya, shaqada tubada tareenka Hyperloop waxay ku bilaabatay mudnaanta shirkada Virgin Hyperloop One. Nidaamkan, safarka tareenka ayaa laga yareyn doonaa saacadaha 10 illaa daqiiqadaha 76. Jiil cusub oo tareen Hyperloop ah, ayaa soo jeedinaya inay mustaqbalka ka yimaadaan muuqaalkooda [More ...]
Halkalı Khadka Xawaaraha Sare ee Kapikule wuxuu gacan ka geysan doonaa Dhaqaalaha Tekirdag
Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha iyo Agaasinka Guud ee Xiriirka Dibedda ee Midawga Yurub ıncaHalkalı-Ku xir khadka tareenka ÇerkezköyMarka la eego baaxadda K Dhismaha Mashruuca Qaybta Kapıkule ;; warbixin guud oo ku saabsan mashruuca iyo [More ...]
RayHaber 26.07.2019 Warbixinta Shirka
Adeegyada Caymiska waa la helayaa (TÜVASAŞ)
Mısra Öz Sel: 'Ma jeceshahay inaad runta soo bandhigto'
Mısra Öz Sel, oo ku waayey wiilkeeda Oğuz Arda Sel iyo afadiisii ​​hore Hakan Sel intii lagu gudajiray musiibada 'Tralu Train', ayaa lahadlay madaxweynaha AKP Erdogan iyo saraakiisha TCDD. Rakaabka 8 Luulyo ayaa duullimaadyadooda ku tagaya Kapıkule-Istanbul dhanka 2018 [More ...]
Xakamayn adag ee Isticmaalka Baaskiilka ee Sekapark
Sekapark, mid ka mid ah xarumaha soo jiidashada ee Kocaeli, waa mid ka mid ah meelaha ay dadku ku neefsadaan. Dowladda Hoose ee Magaalada, oo u oggolaanaysa muwaadiniinta u yimaada Sekapark qoysaskooda in ay waqti ku qaataan nabadgelyo, waxaa ka mamnuuc ah in lagu isticmaalo meelaha cagaaran iyo wadooyinka baaskiilka. [More ...]
Hawlaha Wadooyinka ee Demoqraadiyada İzmir ee Dimuqraadiyadda ayaa Bilaabmay
Dowlada Hoose ee Magaalada Izmir waxay bilowdey howlo loogu tala galay wadooyinka dhismaha jaamacada Izmir Democracy deegaanka oo laga dhisayo dhulka ku dhagan guryaha TOKI. Dowladda Hoose ee Magaalada İzmir, oo ahmiyad weyn u leh waxbarashada, waxay ku taal dejinta Jaamacadda Dimuqraadiga ee Uzundere, Karabağlar. [More ...]
TCCD Stone Quarry Council of State 'Stop' ayaa yidhi
Maareeyaha guud ee Temp Menemen'da TCDD ee qodista qorshuhu ahaa inuu sameeyo Isutagga Izmir 'EIA looma baahna' go'aanka Izmir 3. Maxakamadda Maamulka ayaa baajisay. TCDD ayaa rafcaan ka qaadatay arrinta, laakiin Golaha Gobolka, maxalliga ah [More ...]
Maanta taariikhda: 26 July 1926
Maanta taariikhda 26 July July 1926 ayaa qandaraas la leh shirkadda Beynelmilel ee Hurdada iyo hurdada jiifka iyo qadada cuntada.